Mantaince - Wuxi Linbay Makiinado Co., Ltd
dayactirka Daily daryeelka dhaafin door muhiim ah kordhiyo waqtiga howlgalka qalabka iyo tayada isagga rogid. Sidaa darteed, fadlan samayn waxyaalaha soo socda in aad wax soo saarka maalinlaha ah iyo isticmaalka.
1. Ku dar iyo sheegtaa inuu isxidho inta badan qaybaha ka baxsan. (Sida silsilad driving)
2. Dusha ciidda dushiisa of isaguu ku inta badan, gaar ahaan meel ka baxsan shaqeeyaan. Haddii aadan isticmaalin muddo dheer, waa in aad u sheegtaa mashiinka iyo isxidho in dusha duuban oo aad u baahan tahay u nadiifi marka aad isticmaasho marka ku xigta.
3. Haddii qalabka uusan isticmaalin muddo dheer, waa in aad isticmaasho balaastikada maro ama articles kale inay dedaan iyo aragto in ay ka fogaadaan roob iyo qoyan, gaar ahaan sanduuqa maamula korontada
4. Jarida waa dar isxidho in meelaha ay u baahan tahay isxidho codsiga
5. Caadi ahaan eegto saldhiga Haydarooliga iyo tirada saliidda mashiinka deceleration waa in aad ku darto in markii tiro saliid yaraanta
6.To sanduuqa qalabka korontada iyo keenaysaa kasta oo ay xaaladdu lala, waa in aad sida caadiga ah aad u hubiso oo nadiif ah ciidda.